आजै १२ औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्ने ! सम्भावित मन्त्रीहरु को ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागेका छन् । आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सोमबार पार्टीका कार्यवहाक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा थप छलफल गरेका थिए ।
मंगलबार १२ बजे बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । सो बैठकभन्दा अघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्ने बताइएको छ ।
आइतबारको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका तीनवटा मोडेलमा छलफल भएको थियो । पहिलो सुरुमा मन्त्री भएका सबैलाई बिदाइ गर्ने, दोस्रो दुई वर्ष पूरा गरेकालाई बिदाइ गर्ने र तेस्रो विकल्पका रुपमा कार्य सम्पादनको मूल्याकनका आधारमा हेरफेर गर्नेबारे छलफल भएको थियो । सचिवालयमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रीहरु फेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
को बाहिरिदै ?
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, र खाने पानी बिना मगर ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा सुरु देखि नै छन्। मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरु रहिरहने सम्भावना कम छ । त्यस्तै, राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिएपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजीनामा दिइसकेका छन् । क्याविनेटमा रहेका पुराना मन्त्रीहरु प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, गिरीराजमणि पोखरेललाई भने राखिराख्नपर्ने चर्चा पनि चलेको छ ।
को नहट्ने ?
पछिल्लो पटक मन्त्री भएकाहरु यसपटक नहट्ने बताइएको छ । यस सूचीमा कानूनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल, संघीय मामिला मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङ, महिला वालवालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ यसपटक ननिस्कने सूचीमा रहेको बताइएको छ ।
को भित्रिदै ?
नेकपाले विवाद मिलाउन गठन गरिएका ६ सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने चर्चा छ । कार्यदलमा विष्णु पौडेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल र पम्फा भुसाल थिए । उनीहरुसँगै राष्ट्रियसभामा भर्खरै मनोनित भएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि लैजाने चर्चा छ । नेता नेपालले सुरेन्द्र पौडेललाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तै, वरिष्ठ नेता नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुषाल तथा विरोध खतिवडा, खगराज अधिकारी, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरुको नाम पनि भावी मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ ।